संसदबाट भागेको होइन, केही दिनमा आएर जवाफ दिन्छु | Pennepal
Home हेडर संसदबाट भागेको होइन, केही दिनमा आएर जवाफ दिन्छु
काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्यो भन्ने हल्ला चलेको छ रे ! म प्रश्नबाट तर्कने, पन्छिने व्यक्ति होइन्’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘संसदमा दुई तिहाइ मत पाएको, संसदबाटै निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्ने कुरा आउदैन ।’ नेकपा वागमति प्रदेशले आयोजना गरेको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमा संसदमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिने बताए । कामको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले सधैं संसदमा जान भ्याउदैन ।
१५ वर्ष मजाले काम गर्छु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बताएका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले केही दिनभित्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बताएका थिए ।
१२ वर्षअघि भारतको नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले केही दिनअघि सम्पादकहरूकोसँगको भेटमा पनि निकट भविष्यमै पुनः प्रत्यारोपण गर्ने र २०–२५ वर्ष ढुक्क हुने बताए थिए ।
उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भनेर दाबी प्रस्तुत गर्न छुटाएनन् । काठमाडौंका बाटो हेरेर पनि त्यो थाहा हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।
“बहस गर्दा ससाना चौका, कसैलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पत्नीलाई महिला विभाग प्रमुख, छोरालाई युवा संगठनको जिम्मेवारी मिल्यो होला तर देशले के पायो त ? वैचारिक शुद्धताको नामको सङ्घर्षले देशलाई के दियो ?” उनको प्रश्न थियो ।
उनले नेकपाले भुलचुले दुई तिहाइ सन्निकट मत प्राप्त नगरेको बताउँदै सदुपयोग गरिने बताए । तालुका रौं त्यसै नझरेको बताउँदै सङ्घर्ष गर्दागर्दै र देशका लागि केही गरुँ भनेर मिहिनेत गर्दा नै आफू बिरामी परेको बताउन छुटाएनन् ।
अनाडीले अनधिकृत तरिकाले टेप गरेछ !
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा स्पस्टीकरण दिँदै ‘अनाडी’ले अनधिकृत तरिकाले टेप गरेर सुनियोजित रूपमा सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि लगाए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “अनाडीले अनधिकृत रूपमा टेप गरेछ । उहाँले (गोकुल बाँस्कोटा)ले त्यो मेरो आवाज पनि होइन । मलाई थाहा छैन भनिसक्नु भएको छ । प्रमाणित हुँदै जाला । तैपनि प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । अहिले पनि मेरो आवाज होइन भनिराख्नुभएको छ । सत्यतथ्य उहाँले नै भन्नुहोला ।”
उनले कार्यक्रममा दोहोर्‍याएर स्वीस कम्पनीको एजेन्ट भनिएका विजय मिश्र असम्बन्धित र अनाडी भएको बताए ।
“त्यो अनाडी, अनधिकृत मान्छे हो । कसैको प्रतिनिधि होइन । स्वीस कम्पनीले पनि हाम्रो होइन भनिरहेको छ । किन, के उद्देश्यले रेकर्ड ग¥यो ? फ्रान्स र जर्मन सरकारसँग डिल भइरहेको छ । स्वीस कम्पनीको कुरा कहाँबाट आयो ? मैले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको होइन । पार्टी, सरकार, आन्दोलनलाई बदनाम गराउन खोजिएको हो,” उनले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै भने ।
उनले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा माइतीघरमा उफ्रिएर सरकारको विरोध गरेको स्मरण गराउँदै बाँस्कोटामाथि आरोप लाग्नेबित्तिकै फलानो पनि मुछियो आहा.. भनेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
“भ्रष्टारचार भएझैं गरेर प्रचार गरिएको छ । दोषी प्रमाणित भएको छैन । मुद्दा चलेको छैन,” उनले भने ।
सोही प्रकरणमा उनले आफूविरुद्ध पनि उजुरी परेको पत्रिका पढेर थाहा पाएको भन्दै त्यससलाई पत्रु उजुरीको संज्ञा दिए ।
“मलाई समेत जोडेर उजुरी हालेको भन्ने समाचार पत्रिकामा पढेको हुँ । त्यसो हो भने त्यो पत्रु उजुरी हो । भ्रष्ट उजुरी हो,” उनले आक्रोशित हुँदै भने ।
उनले सरकारले भ्रष्टचार गर्ला, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ला भनेर चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरे ।
“भ्रष्ट देखिए अनुहार नहेरी कारवाही गर्छु । ऐया आत्था गर्न पाइँदैन,” उनले थपे ।
उनले सरकारले टेलिस्कोप लगाएर भ्रष्टाचारीको खोजबीन गरिरहेको बताउँदै पहिलेको तुलनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको दलील पेस गरे ।
“अख्तियार सक्रिय भएको । उजुरीको संख्या बढेको छ । १२–१३ वर्षअघिका कान्ड बाहिर निक्लिएका छन् । सुन तस्करी घटेको छ । मझेरीमा गाडिएका, ओढारमा लुकाइएका सुन पनि फेला पारिएको छ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले केकमा राष्ट्रवाद खोज्न थालेको आरोप लगाएका छन् । जन्मदिनका दिन यती समूहको प्रायोजनमा केक काटिएको र पार्टी आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने केही विषय नपाएका बताए ।
वागमती प्रदेश कमिटीले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले भने, “पत्रकारहरू दुर्गम गाउँमा बाटो, पानी बत्ती पुगेको लेख्दैनन् । बत्ती आएको खुसीयालीमा जनता नाचेको लेख्दैनन् । कतिको भात खाए भनेर खोज्दै हिँड्छन्, त्योचाहिँ लेख्छन् ।”
दुर्गम गाउँमा आफूले पानी, बत्ती, विजुली, बैंकको शाखा लिएर गएको बताउँदै उनले भने, “जनताले त्यसकै खुसीयालीमा केक काटे । बाजा बजाए । नाचे । पत्रकारहरू त्यो लेख्दैनन् । कसले केक ल्यायो ? कतिको भात खाए भनेर लेखेछन् । जनताले केक ल्याएछन्, के राखिएको थियो मैले त हेर्दा पनि हेरिनँ । आफू नेवारको ज्वाइँ परेँ, ऐला (रक्सी) ल्याउ भन्नु भएन । जे ल्याए त्यो छुन परिहाल्यो । एक डालो अण्डा, माछा ल्याएको थियो छुँदै पठाएँ”
उनले नेपालको नक्सा राखिएको केक काट्दा देश काटिएको रूपमा बुझिएको भन्दै युट्युव खोलेर अरू देशका चलनचल्ती हेर्न आग्रह गरे ।
“युट्युव खोल्नुहोस्, त्यहाँ मोदीको तस्बिर पनि आउँछ । मन परेको चिज केकमा राखेर काट्ने चलन नै हो । मेरो तस्बिर पनि केकमा राखेर काटेका छन् । मै काटिएँ त !,” उनको ठट्यौली थियो ।
उनले प्रतिपक्षीले विरोधको मुद्दा नै नपाएपछि केकमा राष्ट्रवाद खोज्न थालेको आरोप लगाए ।
“भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा बोलने । आफू भोकभोकै पर्दा पनि बोलेन । चुल्हो नबल्दा बोलेन । अहिले केकमा राष्ट्रवाद खोज्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस केक राष्ट्रवादी हो । नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दी भयो पनि भन्न नसक्ने केको राष्ट्रवादी ! म नेपाली कांग्रेसलाई भन्न चाहन्छु यस्तो पाराले राजनीति हुँदैन,” उनले भने । उनले जन्मदिन प्रकरणमा कांग्रेसको विरोधलाई बेकारको तमासाको संज्ञा दिए ।